8-da Saxiix Ee La Filayo In Ay Dhacaan Suuqa kala iibsiga premier League ee furmay maanta %
Waxaa dhamaaday inta badan horyaalada yurub ee kala duwan iyada oo qaar kalena todobaadka dambe la ciyaari doono kulamadii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedka
Suuqa kala iibsiga premier League ayaa furmay maanta oo khamiis ah si la mid ah horyaalada kale ee yurub laakiin horyaalka premier League ayaa xirmi doona 8 bishi August ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub ee premier league halka suuqa horyaalada kale xidhmi doonaan 31 bisha August.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa saxiixyada ugu waaweyn ee la filayo in ay dhacanaan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Xiddiga reer Brazil ayaa si weyn loo filayaa in uu boorsooyinkiisa ka qaato kooxda Barcelona kadib markii uu ku fashilmay kooxda kuna qaatay 18 bilood oo uu ku dhibaatooday tan ilaa markii uu kaga soo biiray kooxda Liverpool suuqii January ee 2018 waxana lala xiriirinayaa kooxaha Chelsea, PSG iyo waliba Man United.
Waa midkii ugu hadal haynta badnaa suuqa kala iibsiga xagaaga waxana uu haatan si aad ah ugu dhaw yahay in uu dhamaystirmo xilli la sheegayo in ay kooxaha Chelsea iyo Rela Madrid ka heshiiyeen haatana sugayaan in ay Blues ciyaarto kulankooda ugu dambeeya xilli ciyaareedka ee Finalka Europa League si loogu dhawaaqo.
Xiddiga reer Wales ee Gareth Bale ayaa u muuqda mid haatanba ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyay ee kooxda Real Madrid kadib markii uu Zidane si cad u qirtay in uuna xiddigu ku jirin qorshihiisa mustaqbalka tababaraha ayaa arintaas ku xoojiyay in uu xiddiga ka reebay laabdii kulan ee ugu dambeeyay waliba la filayo in uu mar kale ka reebo kulanka ugu dambeeya ee ay Real Madrid ciyaari doonto xilli ciyaareedka horyaalka La Liga.
ilaa haatan ma cada kooxda uu ku dambayn doono laakiin kooxaha Bayern Munich, PSG iyo Man United ayaa xiiso u muujiyay adeegiisa laakiin waxa uu boorsooyinkiisa ka qaadan doonaa Bernabue.
Waa xiddig kale oo si weyn loo filayo in uu isaga tago Man United xilli lala xiriirinayo kooxda Real Madrid ilaa haatan xaqiiqo ma ahan ama lama hubo sida loo hubo Hazard laakiin Los Blanos ayaa noqon karta kooxda cusub ee xiddiga ku guulaystay koobka adduunka xilli uu u muuqdo in uu soo dhamaaday wakhtigiisii Old Trafford.
Real Madrid ayaa tartan ku aadan xiddiga kala kulmaysa kooxaha Juventus iyo Barcelona kuwaas oo sidoo kale lala xiriirinayo saxiixa xiddiga.
5.David de Gea:
Hadii ay Man United u baahantahay in ay dib u dhis weyn samayso lacag badan ayaa loo baahan yahay waxana ay u badantahay in ay kooxdu iibiso De Gea kaas oo haatanba dalab ka helay kooxda PSG.
Heshiiska Goolhayaha ayaa dhici doona 2020 ilaa haatana waxa uu diiday in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda xilli ay sidoo kale kooxdu diiday dalabaadka mushahar ee uu dalbanayo sidaas darteed waxa ay u badan tahay in uu De Gea isaga tago Man United hadii ay Mucjiso dhacdo mooyaane.
Griezmann ayaa kooxdiisa Atletico Madric u sheegay in uu isaga tagi doono kooxda xagaagan waxana ay u badantahay in uu ku biiri doono kooxda Barcelona kuwaas oo ugu dambayn heli doona xiddigii ay doonayeen xagaagii hore.
7.Matthijs de Ligt:
Waa xiddig Griezmann u soo raaci doona Barcelona waana 19 jirka kabtanka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt kaas oo ay Barcelona u doonayso ku xoojinta daafaca iyaga oo la sheegayo in ay wadahadalo horumar leh kula jiraan kooxdiisa Ajax.
8.Xiddigaha Kale Ee Waaweyn:
Kooxda Man City ayaa u baahan badalka mustaqbalka fog ee Fernandinho waxana ay u aragtaa xiddiga kooxda Lyon ee Tanguy Ndombele kaas oo si weyn loo filayo in uu isaga tago kooxda Lyon xagaaga.
Waxa sidoo kale ka mid ah xiddigaha sida weyn loo filayo in ay koox cusub ku biiraan da,yarka kooxda Benfica ee Joao Felix kaas oo lala xiriirinayo kooxo badan oo reer yurub ah oo ay ka mid yihiin Juventus, Man City, Real Madrid iyo waliba kooxo kale.
Real Madrid Oo Wadahadallo Kula Jirta Mohamed Salah